SSC NAPOLI VS ARSENAL: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha SSC NAPOLI VS ARSENAL: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
SSC NAPOLI VS ARSENAL: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
(Napoli) 18 Abriil 2019 – Waxaa caawa ballansan labada kooxood ee SSC Napoli iyo Arsenal si loo go’aamiyo middoodii aadi lahayd nus-dhamaadka EL.
Dhanka Napoli: Meret ayaa goolka ilaalinaya. Hysaj-Ghoulam oo waa dadabyada daafaca ee midig iyo bidix. Allan ayaa khadka dhexe kusoo noqonaya. Weerarka waa isku lamaanan Milik-Insigne, Mertens kaydka ayuu ka amba qaadayaa.
Dhanka Arsenal: Ramsey ayaa ka gadaal ciyaaraya labaalayda Lacazette-Aubameyang, Kubad dhisaha asal Turkiga ah ee Ozil ayaa kaydka kululayn doona.
25 OSPINA, 2 MALCUIT, 21 CHIRICHES, 6 MARIO RUI, 34 YOUNES, 9 VERDI, 14 MERTENS
19 LENO, 20 MUSTAFI, 4 ELNENY, 7 MKHITARYAN,29 GUENDOUZI, 17 IWOBI, 10 OZIL
Previous articleAskari ka tirsan Booliiska Holland oo tacaddi laga yaxyaxo kula kacay gabar Muslim ah! (Kororka Islaam nacaybka)
Next articleDAAWO: ”Mooska waxaa leh Bakayoko!” – Xiriirka Talyaaniga oo ka aamusay CUNSURIYAD lala yaabay!